ဒိုင်အုတ်များ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်မှာ လျှပ်စီးကြောင်းများကို ဦးတည်ရာတဖက်တည်းသို့စီးစေခြင်း(the diode's forward direction) ဖြစ်ပြီး ထိုစဉ်တွင် အခြားတဖက်သို့ ဦးတည်ရာ(the reverse direction)ကို ပိတ်ဆို့ထားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ထို့သို့ကြောင့်ပင် ဒိုင်အုတ်များကို အီလက်ထရောနစ်ပုံစံ check valve များကဲ့သို့လဲ ပုံဖော်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲသို့ ဦးတည်ရာတဖက်တည်းသို့ သွားခြင်းအပြုအမှုကို rectification ဖြစ်စဉ်လို့လည်း ခေါ်ဆိုပြီး alternating current (AC) မှ direct current (DC) သို့ ပြောင်းလဲရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ရက်တီဖိုင်ယာများ၏ ပုံသဏ္ဌာန်ပေါ်မူတည်၍ ဒိုင်အုတ်များကို ရေဒီယိုအသံလှိုင်းများ ဖမ်းယူရာတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
ဒိုင်အုတ်များသည် ၎င်းတို့၏ တသမတ်တည်းမဟုတ်သော လျှပ်စီးကြောင်းနှင့်ဗို့အား ဝိသေသလက္ခဏာများ(nonlinear current-voltage characteristics)ကြောင့် ရိုးရှင်းသော အဖွင့်-အပိတ် လှုပ်ရှားမှု(on–off action)ထက် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အပြုအမူများရှိနေသည်။ Semiconductor diodes များတွင် လျှပ်စစ်ကို သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား(certain threshold voltage or cut-in voltage)အတိုင်း forward direction မှပေးမှသာလျှင် ဆက်သွယ်မှုကို စတင်ပြုလုပ်ပါသည်။(ထိုအခြေအနေအတွင်းရှိ ဒိုင်အုတ်ကို forward-biased အခြေအနေတွင် ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။) Forward-biased diode အတွင်းဖြတ်သန်းသွားမှုကြောင့် လျှပ်စီးကြောင်း(current)နှင့်အတူ အနည်းငယ်ဗို့အား ပြောင်းလဲ(voltage drop)သွားသည်။ ထိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို Voltage reference များအဖြစ်လည်းကောင်း temperature sensor များအဖြစ်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Semiconductor diode များ၏ current–voltage characteristic များကို လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ထုတ်လုပ်စဉ်၌ semiconductor materials နှင့် doping impurities များကို သေချာရွေးချယ်ပြုလုပ်၍ ထားပါသည်။ ထိုနည်းပညာများကြောင့် မတူကွဲပြားသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် special-purpose diode များ ထုတ်လုပ်လာနိုင်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဗို့အားများအား ထိန်းညှိရန်အတွက်အသုံးပြုသော ဒိုင်အုတ်များ (Zener diodes)၊ ပြင်းအားမြှင့် ဗို့အားများစီးဆင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အသုံးပြုသော ဒိုင်အုတ်များ (avalanche diodes)၊ ရေဒီယိုနှင့် တီဗွီ receiver များကို အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ ထိန်းညှိမှုပြုလုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသော ဒိုင်အုတ်များ (varactor diodes)၊ radio-frequency oscillation များ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက်သုံးသော ဒိုင်အုတ်များ (tunnel diodes, Gunn diodes, IMPATT diodes)၊ အလင်းထုတ်လွှင့်ရန်အတွက်သုံသော ဒိုင်အုတ်များ (light-emitting diodes)။ Tunnel၊ Gunn နှင့် IMPATT diodes များတွင် အနှုတ်လက္ခဏာခုခံအား(negative resistance) ရှိပြီး ဒါဟာ Microwave နည်းပညာနှင့် switching circuit များတွင် အသုံးဝင်ပါသည်။
ဒိုင်အုတ်(vacuum နှင့် semiconductor နှစ်မျိုးစလုံး)ကို shot-noise generator များအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၎င်းတို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိချိန်တွင် ထိုကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများကို ရက်တီဖိုင်ယာဟုသာ ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ Tetrodes ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိချိန် ၁၉၁၉ ခုနှစ်မှသာ ဝီလျံ ဟင်နရီ အက်ဂဲလ်စ်(William Henry Ecclesမှ diode ဆိုသော ဝေါဟာရကို တီထွင်ခဲ့ရာ ဂရိဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာသော စကားလုံးဖြစ်ပြီး ဒိုင် (di) (δί မှ)သည် 'နှစ်' ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး အုတ်(ode) (ὁδός မှ)သည် 'လမ်းကြောင်း' ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
Guarnieri, M. (2011). "Trailblazers in Solid-State Electronics". IEEE Ind. Electron. M.5(4): 46–47. doi:10.1109/MIE.2011.943016.
Guthrie, Frederick (October 1873) "Onarelation between heat and static electricity," The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 4th series, 46 : 257–266.
Diode။ Encyclobeamia.solarbotics.net။ 2006-04-26 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
Skyworks Solutions, Inc., Mixer and Detector Diodes
Microsemi Corporation Schottky web page